Ny paikady manokana, ny fiaraha-miombon'antoka tsara amin'ny làlana, marika mialoha miaraka amin'ny primer natokana ho an'ny orinasanay (indrindra ho an'ny fotony beton) dia hanamafy ny firaisan-kina.
Ny lokonay dia misy fitaovana fanoherana ny fikororohana. Amin'ny fikajiana tsara ny fivezivezena, ny fitaovana manohitra ny fivezivezena dia afaka miantoka tsara ny fanoherana-malama ary mampitombo ny fiarovana ny fifamoivoizana.
3. Vokatry ny taratra
Araka ny tahan'ny fametahana ny vakana fitaratra, misafidy tsara vakana vita amin'ny vera mifangaro sy avo lenta miaraka amin'ny tahan'ny sombin-javatra samihafa. Afangaroy ao anaty loko izy ireo ary apetaho vakana fitaratra karazana mifangaro rehefa manatanteraka ny marika vaovao sy taloha ny fisaintsainana foana.
Mampiasà raikipohy hafa hamokarana ny loko arakaraka ny mari-pana, ny hamandoana ary ny fipetrahan'ny arabe rehefa manatanteraka, miantoka ny hafainganam-pandehan'izy ireo haingana sy ny fananana antifouling amin'ilay marika.
Safidio ny tahan'ny hazavana sy ny hafanan'ny hafanana tena tsara, asio additives tsy miovaova ultraviolet miaraka amin'izay, hahazoana antoka fa ny loko sy tara-pahazavana efa ela niasa na dia teo ambanin'ny tara-masoandro mahery aza.
6. Manohitra ny vaky volo
Ny famotehana volo ny fanamarihana dia olana ara-teknika amin'ny fanaovana marika amin'ny làlan'ny indostrian'ny fitaovana an-trano sy any ivelany. Taorian'ny fikarohana maharitra ary tamin'ny alàlan'ny fampidirana fitaovana lipida fanoherana ny hafanana avo lenta sy ny mpiorina miasa, dia namaha tanteraka ny olan'ny volo volo ny orinasanay nandritra ny fanatanterahana.
1.Nanaraka ny vokatra: Jig jiosy hely UV japoney
2.Nname: mitsoka fantsona mamono hook fantsona
3.Ty hook ity dia fitaovana mazika amin'ny jono sy fipoahana trondro. Tena tsara ihany koa ny mandeha manjono any amin'ny ranomasina lalina ary 4. manomàna angisy fohy mba ho jono.
Fahombiazana avo lenta sy famolavolana jono ho an'ny jono
1. Fomba fanjonoana: jono amin'ny rano velona
2.Lure Type: Lure Packs Vibration / VIB Popper Pencil Crank - Ny Bass manokana indrindra dia mahita fa tena manintona ity karazan-jaza ity., Minnow - Ny hazandrano Minnow dia toy ny trondro ary entina mamakivaky ny rano ahafahany mihetsika amin'ny fomba samihafa satria ny tsy fandriam-pahalemana noho ny bib eo aloha eo ambanin'ny loha. Bait mafy
Fomba fanjonoana: jono anaty rano, jono
Fitaovana: Plastika mafy
Refy Net (cm): 1-3
Lanjam-be (g): 80-100g
Fitaovana fametahana fitafiana 5-5 volom-borona volamena sy volom-borona mifangaro volafotsy
Minnow Fanjonoana plastika sarotra apetraka avo lenta
5.Torozotra amin'ny tanany: azo ovaina ny orient orientation-tanana
123456 Manaraka> >> Pejy 1/43